သဒ္ဓါလှိုင်း: ဘယ်သောအခါမှ ပျောက်ကွယ်မသွားမဲ့ `အမေ´
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:08 PM
အမေများနေ့ကို ထပ်တူ ဂုဏ်ပြုသွားပါတယ်...သဒ္ဓါရေ...
ကမ္ဘာပေါ်က အကြီးမြတ်ဆုံး အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ အမေကို
စာတွေနဲ့ရေးဖွဲ့ကြပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ လုံလောက်တယ် ဆိုတာမရှိတဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေနဲ့ ပြည့်စုံသူပါဘဲနော်.. ကြီးလာလေ အမေ့ရဲ့မေတ္တာတွေကို နားလည်သဘောပေါက်မိလေပါဘဲ..
လူတိုင်း အမေ့မေတ္တာကို စောစော နားလည်သဘောပေါက်စေချင်တယ်..
အမေဆိုတဲ့ မေတ္တနဲ့ အရာရာကို ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ အမေတွေအတွက်
အမတို့ တွေ ကြည်နူး မှုတွေ ဝိုင်းခံစားကြတာပေါ့..
ဒူးက အမာရွတ်ကိုတွေ့တိုင်း ချစ်တဲ့သမီးကို သတိတရ ရှိနေတော့မှာပဲ...
ဖတ်ရှုခံစားသွားပါတယ်။ အမေများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်။
I'm also feel with you.coz everybody love their mother and I'm one of them.now I miss to much to my mother.actually my mother pass away last year.arr when I thinking about my mother I cannot do anything I was too bad upon my mother.If possible I want to take back the time for 1 year.I want to pay backalot to my mother but it's cannot be.So I want to request that take care your mother of your best when she still live please.........
ကြီးမြတ်သော မိခင်တွေကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဂုဏ်ပြုကြပါစို့
မနက်ဖြန်တော့ အမေ့ကို ဖုန်းဆက်ရမယ်
သဒ္ဓါရေ...သဒ္ဓါက အဲဒီလိုလေးတွေ ရေးထားတော့ မေမေ့ကို လွမ်းသွားရပြီ...
အစ်မရေ အမေးများနေ.အမှတ်တရ ပိုစ်.လေးကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ.လာဖတ်သွားပါတယ်အစ်မ ကျွန်တော်မေမေလဲ မမေမေ လိုပဲ အကုန်လုံးတူတယ် သားသမီးပေါ်ဂရုစိုက်ချက်ကတော. အစ်မရေးထားတဲ.အတိုင်းရယ် ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအပေါထားရှိတဲ.စိတ်ထား အားလုံးအတူတူပဲ ကျွန်တော်လဲမတင်ဖြစ်လိုက်ဘူး အစ်မ အဲ.နေ.ကိုကျော်သွားမှသိလိုက်ရတယ် အခုတလောအဆင်မပြေမှု.တွေအရမ်းများနေတာနဲ. စိတ်အရမ်းညစ်နေတယ်အစ်မ အဲ.ဒါနဲ.ပဲဆိုက် ထဲလဲမဝင်ဖြစ်တာ....မိဘနဲ.ထာဝရ ပျော်ရွင်စွာနေနှိင်ပြီး လုပ်ကြွေးပြုစုနှိင်သော သမီးကောင်း ရတနာ လေးဖြစ်နှိင်ပါစေ အစ်မ...ပျော်ရွင်ပါစေ..
အလုပ်တွေပိနေလို့ နောက်ကျမှ ရောက်ရတာခွင့်လွှတ်နော်..။
ကျွန်မတို့အားလုံး အမေနေ့ မသတ်မှတ်ထားလည်း
အမေများအားလုံး သားသမီးများ၏ နွေးထွေးမှုကို ပြန်လည် ရရှိပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေ။